Vaovao - Manomboka amin'ny Janoary ka hatramin'ny Aprily
mpanao fikarohana kely crawler
excavator kely misy kodiarana
vanobe koa samy
Fahaizana sy ekipa famokarana
Manomboka amin'ny Janoary ka hatramin'ny Aprily
Nanomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'ny aprily dia 48,271 kamiao forklift no naondrana, miakatra 2,47% isan-taona
Araka ny antontan'isan'ny Sampana Indostrialy Vehivavy Sampana ao amin'ny Fikambanan'ny Indostrian'ny Masinina, dia namidy ny forklift 69.719 tamin'ny volana aprily 2020, miaraka amin'ny fiakarana 12 915 isan-taona, fiakarana 22,7%; Anisan'izany, ny orinasa an-trano dia nivarotra singa 64.461 tamin'io volana io, fiakarana 12 945 vondrona isan-taona, fitomboana 25,1%; Ny haben'ny varotra ataon'ny orinasa vahiny amin'ity volana ity dia 5258, nahena 30 isan-taona isan-taona, na 0,57%. Tamin'ny volana aprily, ny forklift herinaratra dia nivarotra singa 33.750, fiakarana 9 491 singa isan-taona, nitombo 39,1%; Ny habetsaky ny varotra forklift fandoroana anatiny dia 35.969 singa, fiakarana 3,424 unit isaky ny taona, fitomboana 10,5%. Ny forklift elektrika dia 48,4%.
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny volana aprily tamin'ny 2020, dia forklift 197.518 no amidy tamin'ny totalin'ny fihenan'ny taona 12.265 na 5,85%. Anisan'izany: ny orinasam-pandraharahana dia namidy seta 181107, seta 7129 latsaky ny tamin'ny taon-dasa, nihena 3,79%; Ny habetsaky ny varotra ampiakarin'ireo orinasa vahiny dia 16.411, izay nihena 5 136 na 23,8% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Ny habetsaky ny varotra manangona kamiao forklift dia 95 697 unit, fitomboana 3,788 unit isan-taona, fitomboana 4,12%; Ny forklift elektrika dia mitentina 48,4%, ary ny habetsaky ny fivarotana forklift fandoroana anatiny dia 101.821 singa, 16053 unit ambany noho ny tamin'ny fe-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa 13,6%.
Ny varotra kamiao Forklift tamin'ny volana aprily dia 56.626 singa, fiakarana 11.316 singa isan-taona, fiakarana 25%. Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Aprily, dia 149 247 ny varotra teto an-trano, nihena 8,25% isan-taona.
Ny fanondranana forklift an'ny singa 13.093 tamin'ny volana aprily dia nitentina 18,8% ny totalin'ny varotra tao anatin'ny volana, tafakatra 1,599 ny isan-taona, hatramin'ny 13,9%. Anisan'izany, ny fanondranana kamiao forklift herinaratra tamin'io volana io dia singa 9.077, fiakarana 2.335 singa isan-taona, nitombo 34,6%; Ny fanondranana forklift fandoroana anatiny amin'ny volana mitovy 4016 singa, 736 unit ambany noho ny vanim-potoana iray tamin'ny taon-dasa, nidina 15,5%. Ny fanondranana forklift elektrika dia nahitana 69,3%.
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny volana aprily, ny totalin'ny fanondranana kamiao forklift dia 48271, mitontaly 24,4% amin'ny totalin'ny varotra, fitomboana 1163 isan-taona, fitomboana 2,47%. Anisan'izany, forklift herinaratra 33.761 no naondrana, fiakarana 3,953 na 13,3% isan-taona. Ny fanondranana kamiao forklift mandeha amin'ny herinaratra dia nahatratra 69,9%, ary ny fanondranana kamiao forklift fandoroana anatiny dia 14 510 unit, fihenan'ny 2,790 unit na 16,1% isan-taona.
Fotoana fandefasana: Jun-18-2021
Ampio: No.1, Hongye Street, Distrikan'i Shahekou, Dalian City, Sina